Yuusuf Garaad Oo Kahadlay Go’aankii maamul goboleedyada | ogaden24
Yuusuf Garaad Oo Kahadlay Go’aankii maamul goboleedyada
Sep 13, 2018 - Aragtiyood
Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Soomaaliya Mr Yuusuf Garad ayaa ka hadlay Go aankii Golaha iskaashiga.
Qoraal uu soo dhigay barahiisa Bulshada ayuu ku sheegay in is af-garan waaga dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada uu dib u dhac u keeni karo dowladnimada.
“Is af-garan-waaga Federaalka & D. Goboleedyadu wuxuu dib-udhac u keeni karaa Dowladnimadeenna, mana ahan in uu heerkaan kor u sii dhaafo, Waa lama huraan in dhinac kastaa uu arrinta ku wajaho maskax fayow, deggan, dulqaad leh, xal-doon ah oo u tureysa Dowladnimada”ayuu tori Yuusuf Garaad.
Dowlad goboleedyada oo 4-tii bishan war murtiyeed ka soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ayaa waxay ku dhawaaqeen inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dowladda Federaalka, waxaana tallaabadaas ka dhashay mowjado siyaasadeed oo xilligan hareeyay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa shir wadatashi isugu yeeray Madax maamul goboleedyada 17 illaa 18-ka bishan September, hase ahaatee maamul goboleedyada ayaa qaadacay ka qeyb galka Shirkaas.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ayaa bilaabay dadaalo lagu xalinayo xiisada siyaasadeed, isla markaana ku dhawaaqay inuu wafdi u dirayo deegaanada maamul goboleedyada.